गोप्य राख्नुहोस् संधै यी ७ कुराहरुः तपाईको जीवनमा हुनेछ यस्तो चमत्कार ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/गोप्य राख्नुहोस् संधै यी ७ कुराहरुः तपाईको जीवनमा हुनेछ यस्तो चमत्कार !
गोप्य राख्नुहोस् संधै यी ७ कुराहरुः तपाईको जीवनमा हुनेछ यस्तो चमत्कार !
शृष्टिले एक अर्कालाई आनन्द दिनुपर्छ । ईश्वरको इच्छाविना अस्तित्वमा आएका चिजहरु यस धर्तिमा छैनन् । यसकारणले हरेक चिज एक अर्काका परिपुरक छन । एकले अर्काको आवश्यकताहरु र स’मस्याहरुलाई समाधान गर्नु यसको धर्म हो ।माटो, पानी र खनिजले झारपात र रुखलाई भोजन जुटाइरहेका छन । झारपात र रुखहरुले जनावर, पक्षीहरु लगायत मानिसहरुका आवश्यकताहरु पुरा गरिरहेका छन ।तेसैले मानीसले बोल्दा हीड्दा मानीसहरुको भी’डमा सोचेर मात्र बोल्नु अती आवसेक्ता हुन्छ।
१दान – तपाईले कसलाई दिनुभएको छ भने त्यो कुरा अरुलाइ भन्नु राम्रो हुदैन । दान धर्म लिएको कुरा यदि भन्नु भो भने त्यसको तपाईलाइ फल प्राप्त हुदैन ।२ मन्त्र – यदि तपाईलाइ गुरुले मन्त्र दिनुभएको छ भने त्यो मन्त्र कसैलाइ भन्न हुदैन । किनकी मन्त्रमा शक्ति हुन्छ ।३ घर परिवारको ‘झ’गडा – कहिले काहि परिवारमा झ’गडा हुनु सामान्य कुरा हो । झ’गडा धेरै जसो घरहरुमा हुन्छ । घरमा झ’गडा हन्छ भने यो कुरा कसैलाई भन्न हुदैन ।यदि परिवारको झ’गडा भएको अरुले थाहा पाएमा ग’लत फाइदा उठाउन सक्छन् ।४ अपमान – आफू कहि कतै अ’पमानित भइएको छ भने यस्तो कुरा पनि अरुलाई भन्न हुदैन । किनकी अरुले तपाईको खिल्ली उडाउन सक्छन् ।५
रातिक्रि’डा – जीवनमा यौ’न सम्बन्धको विषयमा कसैलाई पनि भन्नु हुदैन । यो कुरा अरुलाइ भनेर मजा लिनु राम्रो कुरा होइन । तपाइँले यौन क्रि’डाका कुरा अरुलाई भन्न थाल्नु भो नकारात्मक परिणाम ब्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ ।६ पद प्रतिष्ठा – मानिसहरु पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरेपछि मात्तिने हुन्छ । तर पद र प्रतिष्ठको विषयमा सकेसम्म गो’प्यता राख्नु राम्रो हुन्छ ।७ धन हानी – जीवनमा तपाइँलाई धन हा’नीको अवस्था परेमा आर्थिक नोक्शानीको बारे कसैलाई भन्न हुँदैन् । मानिसहरुले तपार्इंको धन हा’नी हुँदा तपाइसँग भएको धनबारे जानकारी पाउने गर्छन् । त्यति मात्र होइन मात्र होइन हा’नी भएका कारण तपार्इंबाट टाढिने पनि हुन्छ ।